Warar - Meelaha Codsiga ee Alxanka Toos ah
Horumarinta dhaqaalaha, dadku waxay ku sii kordhayaan baahida tamarta. Gaadiidka dhuunta waa hab muhiim u ah gaadiidka tamarta. Waa ammaan iyo dhaqaale sidaa darteedna si ballaaran ayaa loo isticmaalay. Mashiinka alxanka tooska ah waxaa si ballaaran loogu isticmaali karaa alxanka otomaatiga ah ee dhuumaha ee warshadaha kala duwan sida batroolka, gaaska dabiiciga ah, warshadaha kiimikada, saldhigga biyaha, haanta jirka, injineernimada badda, bixinta biyaha iyo injineernimada dheecaanka, injineernimada kuleylka iyo wixii la mid ah. Meelaha badan ee lagu dabaqi karo, dhuunta gudbinta ugu badan ee saliida iyo gaaska waa shaki la’aan. Sidaa darteed, qalabka alxanka wanaagsan waa inuu ku saleysnaadaa inuu si fiican ula jaan qaadi karo shuruudaha alxanka ee dhuumaha saliidda iyo gaaska oo ah heerka is-qiimaynta.
Codsiga baahsan iyo dhiirrigelinta dhuumaha si toos ah alxanka saliidda iyo gaaska dabiiciga ah, isla mar ahaantaana, dhismaha dhuumaha ayaa leh shuruudo sare iyo sare oo ah joogtaynta tayada alxanka, aad iyo aad bay u adagtahay in la tababaro alxamideyaasha dhaqanka ee gacanta. Dhuxul otomaatig ah oo otomaatig ah wuxuu yareeyaa xoogsaarka foosha welina wuxuu kobciyaa waqtiga walidiinta Gaagaaban, hawsha goobta ee alxanka tooska ah ayaa sifiican looqabtaa, iyo waxqabadka tolida alxanka ayaa kafiican. Shiinaha waa waddan leh dhul aad u adag. Tiro badan oo magaalooyinka dadku ku badan yihiin waxay ku yaalliin buuraha koonfureed iyo buuraha iyo meelaha isku xidhka biyaha, waxaana jira baahi dheeri ah oo loogu talagalay gaadiidka dhuumaha gaaska dabiiciga ah. Waxaa jira kuwo badan, sidaa darteed qalabka alxanka biibiile otomaatig ah oo ku habboon dhul adag ayaa aad loogu baahan yahay.
Isku-darka astaamaha qaybta buuraha dhaadheer, qaybta shabakadda biyaha iyo deegaanka saldhigga oo leh meel shaqo oo xaddidan, Tianjin Yixin wuxuu si dabiici ah isugu xiraa mashiinka alxanka oo dhan si otomaatig ah, wuxuuna ikhtiraacaa cabir yar, shaqo aad u xoog badan, iyo tayo wanaagsan oo alxamiddu deggan tahay. . Xalka nidaamka qalabka wuxuu buuxiyaa baahiyaha dhuunta waxqabadyada alxanka tooska ah ee bay'adaha dhismaha adag.
Dhawaan, waxaan baaray warbixinta baaritaanka ee shilka qarxinta dhuumaha ee qaybta Shazi Town ee Degmada Qinglong, County Qinglong, Qianxinan Prefecture ee dhuunta gaaska dabiiciga ee Shiinaha iyo Myanmar 10-kii Juun 2018. Shilkaasi wuxuu sababay 1 dhimasho iyo 23 dhaawac ah, iyo dhaqaale xumo toos ah oo dhan 21.45 milyan yuan.
Shilka waxaa sababay jabka jilicsan ee gunta dhexda, kaas oo sababay qadar badan oo gaas dabiici ah oo ku jira dhuumaha si ay u daadato oo ay ugu dhex milanto hawo si ay u sameyso walxo qarxa. Khilaafka xoogan ee udhaxeeya xaddiga badan ee gaaska dabiiciga ah iyo jabitaanka dhuumaha ayaa sababay koronto aan caadi aheyn oo keenta gubasho iyo qarax. Sababta ugu weyn ee shilka waxay ahayd in tayada alxanka goobta uusan buuxinin shuruudaha heerarka la xiriira, taasoo keentay jab dillaac ah oo ku xirmay guntinta hoos tillaabada culeyska la isku daray. Cunsurrooyinka dhibaatada u keena tayada alxanka guntimaha waxaa ka mid ah hababka alxanka dabacsan ee dhuumaha birta ee X80 ee goobta ku yaal, shuruudaha hoose ee heerarka imtixaannada ee aan waxyeellada u geysan goobta, iyo maaraynta tayada nacasnimada dhismaha. Semi-otomaatiga ah + alxanka gacanta ayaa loo isticmaalaa alxanka dhuumaha gaaska dabiiciga ee khadka Shiinaha iyo Myanmar. Shakhsiyaadka walxaha ku shaqeeya ee qandaraasleyda qandaraasleyaasha alxanka shilalka ayaa been abuurtay shahaadooyin wadaha qalabka alxanka. Sababta iyo cawaaqibka shilka waa wax laga naxo.
Dhuxusha otomaatiga ah ee tuubada otomaatiga ah guud ahaan waxay isticmaashaa howlaha socodka baaxada weyn, buuxinta iyo daboolida alxanka si toos ah ayaa loo soo gabagabeeyaa, taas oo hubinaysa joogtaynta tayada alxamida marka loo eego buugga, taas oo hubinaysa tayada alxanka, iyo bixinta dammaanadda aasaasiga ah ee muddada dheer ee badbaadada hawlgalka dhuumaha.